US, World Bank na-eziga Ghana ịdọ aka na ntị maka agha gbasara ndị mmekọ nwoke na nwoke
US, World Bank na-eziga Ghana ịdọ aka ná ntị maka ndị na-edina ụdị onwe ha
By bryanekobe	 On Mee 29, 2021
United States na World Bank akpọkuola Ghana ka ọ kwanyere ikike ndị mmekọ nwoke na nwoke, mmekọ nwoke na nwoke na nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha ùgwù (LGBT) na mba ahụ.
Dabere na Reuters, ndị na-enye enyemaka mba ofesi abụọ enweghị afọ ojuju na mkpochapụ ọrụ mmekọ nwoke na nwoke na Ghana.
A kọrọ na onye ọrụ ndị omebe iwu nke United States kwuru, sị: “Anyị na-agba ndị isi nke Ghana ume ka ha kwado nchebe nke iwu ruuru mmadụ na iwu ma rube isi na nkwa ndị ruuru mmadụ na mba ụwa maka mmadụ niile. Nke a gụnyere ndị otu LGBTQI +. Anyị na-akpọ ndị Ghana niile ka ha sọpụrụ ndokwa nke Iwu nke Ghana nke na-ekwe nkwa nnwere onwe ikwu okwu, ikwupụta na nzukọ udo. "
Ekwuru na onye nkwuchite World Bank kwuru na ụlọ ọrụ a na-eleba anya na ọnọdụ na Ghana.
“Anyị maara ọnọdụ siri ike maka ndị LGBTI na Ghana ma anyị na-enyocha ọnọdụ ahụ nke ọma. Dịka otu mba nke World Bank Group, Ghana kwadoro akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze nke Bank gụnyere nke doro anya, nke doro anya ma jikọtara ya na enweghị ịkpa oke maka ọrụ ego Bank. "
N’ọnwa ndị na-adịbeghị anya, obodo LGBTQ nke Ghana agbagogoro oku iji kwado mmekọrịta nwoke na nwoke na nwoke na nwoke na nwanyị ịlụ onwe ha.
Ndị obodo ahụ mepere ụlọ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya na Accra, nke ndị nnọchi anya ụfọdụ nọ na Ghana gara, gụnyere onye isi obodo Australia.
Kamgbe ndị uwe ojii mba Ghana mechiri ọfịs a na-ekwu maka mmeghachi omume site na ihu ọha.
N’izu gara aga, anwụchiri mmadụ 21 na Ho maka ịkwalite ọrụ LGBT na Ho, na mpaghara Volta.
N’ịpụta n’ụlọ ikpe nke ọka ikpe Felix Datsomor nọ n’isi ya, ndị a na-enyo enyo, ụmụ nwanyị iri na isii na ụmụ nwoke ise anabataghị mgbapụta.
Kemgbe ahụ, a tụgharịrị ha n’ụlọ mkpọrọ ma na-abịakwa ụlọ ikpe ọzọ na Fraịde, June 4, 2021.
World BankUSGhanaguerreedina ụdị onwe
Conozca cómo será el parque La Puerta del Diablo al finalizar las obras de remoción - Ihe nkiri
"Mụ na ụmụ nwoke 16 nwere mmekọahụ na otu afọ na achọghị m ikpe gị" - SANTE PLUS MAG